Global Voices teny Malagasy » Mangorom-bolomboasary ny karnavalina tao Brezila ho fanoheran’ny vahoaka ny ‘Bolsogate’ · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Marsa 2019 5:39 GMT 1	 · Mpanoratra Isadora Varejão Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Amerika Latina, Brezila, Fanoherana, Hehy, Mediam-bahoaka, Politika, Zavakanto & Kolontsaina
Tsy misy ifandraisany amin'ny fironana lamaody na fieboeboana tahaka an'i Carmen-Miranda : Nanao akanjo miloko volomboasary ireo Breziliana nilahatra teny an-dalamben'ireo tanàndehibe tamin'ny Karinavalina mba handefasana hafatra any amin'ny filoha Jair Bolsonaro .
Tamin'ny volana Desambra 2018, nanokatra fanadihadiana an'i Fabricio Queiroz , polisy manamboninahitra misotro ronono sy naman'ny fianakaviana Bolsonaro hatry ny ela ka nahazo fandoavam-bola mampiahiahy nandritra ny 2016 sy 2017 tamin'izy mbola delàn'ny zanaka lahin'ny filoha, Flavio Bolsonaro, solombavambahoakan'ny fanjakana Rio de Janeiro tamin'izany fotoana izany (ary senatera ankehitriny ao amin'io fanjakana io ihany) ireo mpampanoa lalànan'ny fanjakana ao Rio de Janeiro. Nomen'ny aterineto Breziliana anarana hoe “Bolsogate” izany tantara manafintohina izany taty aoriana.
Ary tamin'ny volana febroary, nanambara ny gazety Folha de S. Paulo fa nahodin'ny antokon'ny filoha ny famatsiam-bola ho hanaovana fanentanam-panjakana  ka nomeny ireo kandidà tsy nirotsaka mihitsy nandritra ny fifidianana 2018. Tao anatin'ity tantara nanafintohina ity, nandroaka ny iray tamin'ireo mpiara-miasa aminy akaiky, ny Sekretera Jeneralin'ny biraon'ny Filoha teo aloha, Gustavo Bebbiano, ny Filoha Bolsonaro.
Tamin'ny Desambra 2018, nanambara ny Vaomiera Mpanaramaso ny Hetsika Ara-bola (COAF), sampana mpanaramaso federaly fa 1,2 tapitrisa Breziliana reais – maherin'ny 300.000 dolara amerikana – no nalefa tao amin'ny kaonty bankin'i Queiroz  fony izy mbola mpamily sy dekàn'ny solombavambahoakam-panjakana Flavio Bolsonaro. Mpiasa valo tao amin'ny kabinetran'i Flavio no nandoa vola tao amin'ny kaonty bankin'i Queiroz, izay nakan'ny tenany manokana ampaham-bola ary nanaovany fandoavam-bola iray – teo amin'ny 6 700 dolara amerikana – nankany amin'ny kaonty manokan'i Michelle Bolsonaro,  vadin'ny filoham-pirenena ankehitriny.
Mandritra izany, fandrotsaham-bola in-48 tamin'ny vola 2 000 reais (manodidina ny 500 dolara amerikana) no natao tsy nitonona anarana ho an'ny kaonty bankin'i Flavio Bolsonaro tamin'ny taona 2017, nalaina tamin'ny “milina fisintonam-bola (guichet automatique)” tao amin'ny Antenimieram-panjakana ao Rio de Janeiro avokoa izany. Tsy dia nilaza firy momba ireo vola somary kely kokoa ireo rafitra ara-bola, saingy nahatonga ireo mpanadihady mba hiahiahy hosoka ny momba ireo andianà fandrotsaham-bola natao tao anatin'ny minitra vitsy monja. Nilaza i Flavio fa mikasika ny famarotana efitrano ho an'ny namana iray ilay fandoavam-bola .
Atao fanadihadiana ihany koa i Nathália, zanakavavin'i Queiroz, iray amin'ireo havany efatra nampiasain'i Jair Bolsonaro tenany fony izy mbola mpikambana tao amin'ny kongresy. Araka ny filazan'ny The Intercept Brasil, dia tsy mbola nanitsaka ny biraon'i Bolsonaro  nandritra ny 22 volana izy kanefa tao anatin'ny lisitry ny mpandray karama ao amin'ny kabinetra (teo anelanelan'ny taona 2016 sy 2018). No sady tsy mpitsidika ihany koa.
Ahiahiana ho “mpiasa matotoa” izy, “olona iray ao anatin'ny lisitry ny mandray karama saingy tsy tena manao ny asa izay nanakaramana azy. Raha voamarina, dia tsy i Nathália no “mpiasa matotoa” voalohany mifandray amin'i Jair Bolsonaro. Tamin'ny taon-dasa, namoaka vaovao ny Folha de São Paulo fa misy mpiasa hafa mivarotra boaty “açaí” mandritra ny ora fiasany  izay mihoatra ny arivo kilometatra miala ny renivohitra Brasilia.
Nampiantso an'i Queiroz mba hanazava ny zava-nisy hatramin'ny volana Desambra  ireo mpanao famotorana. Vao tamin'ny faran'ny volana febroary ihany izy no nanao izany ary nanoratra: tamin'ny taratasy ho an'ny mpampanoa lalàna fa niezaka  fotsiny “hanitatra” ny isan'ny mpiasa niasa ho an'i Flavio Bolsonaro izy, ary tsy fantatry ny Senatera izany. Tsy hita nandritra ny herinandro vitsivitsy i Queiroz ary avy eo tonga nilaza fa nampidirina hopitaly izy noho ny fitsaboana homamiadana. Tamin'ny resadresaka tamin'ny fahitalavitra  anefa, tsy nahatadidy ny anaran'ny dokotera na ny hopitaly nijanonany izy.
Tamin'ny volana Janoary 2019, nanambara ny gazety O Globo  fa nampiditra ny havan'ilay polisy kapiteny misotro ronono izay ahiahiana tamin'ny famonoana ilay vehivavy mpanolotsaina Marielle Franco sy ny mpamiliny Anderson Gomes  hiasa ao aminy i Flavio.
Ahiahiana ho nampiasa vehivavy kandidà ho fitaovana hahazoana vola ho azy ireo ny olona avy ao amin'ny antokon'ny Bolsonaro PSL (izay mijoro ho Antoko Liberaly Sosialy). Toa nahafantatra ny momba ilay tetika ny roa tamin'ireo minisitra Bolsonaro, ary voaraoka  nandritra ny fivoahan'ny tantara manafintohina ny iray tamin'izy ireo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/03/15/135814/
 handefasana hafatra any amin'ny filoha Jair Bolsonaro: https://www.usnews.com/news/world/articles/2019-03-01/rio-de-janeiro-carnival-kicks-off-with-bolsonaro-backlash
 nahodin'ny : https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/02/entenda-as-evidencias-e-as-versoes-dos-envolvidos-em-esquema-de-laranjas-do-psl.shtml
 nalefa tao amin'ny kaonty bankin'i Queiroz: https://www.reuters.com/article/us-brazil-politics/scandal-involving-brazil-president-elects-son-clouds-inauguration-idUSKCN1OQ158
 Michelle Bolsonaro,: https://en.wikipedia.org/wiki/Michelle_Bolsonaro
 trano tsotsotra : https://oglobo.globo.com/brasil/ex-assessor-de-flavio-bolsonaro-que-movimentou-12-milhao-vive-em-local-simples-na-taquara-rj-23295990
 fandrotsaham-bola in-48 : https://oglobo.globo.com/brasil/em-um-mes-flavio-bolsonaro-recebeu-96-mil-em-depositos-fracionados-em-dinheiro-vivo-aponta-coaf-23384987
 mikasika ny famarotana efitrano ho an'ny namana iray ilay fandoavam-bola: https://oglobo.globo.com/brasil/flavio-bolsonaro-diz-que-depositos-fracionados-sao-dinheiro-de-venda-de-apartamento-23387886
 dia tsy mbola nanitsaka ny biraon'i Bolsonaro: https://theintercept.com/2019/02/28/documentos-nathalia-queiroz-funcionaria-fantasma/
 Nampiantso an'i Queiroz mba hanazava ny zava-nisy hatramin'ny volana Desambra: https://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2018-12-21/fabricio-queiroz-depoimento.html
 resadresaka tamin'ny fahitalavitra: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2018/12/27/bolsonaro-sbt-queiroz.htm
 Marielle Franco sy ny mpamiliny Anderson Gomes: https://globalvoices.org/2018/03/15/city-councillor-and-leading-rights-activist-shot-dead-in-downtown-rio-de-janeiro/